Branch Cashier (Insein) Job at BC Finance Ltd. in Yangon | Accounting & Finance
Branch Cashier (Insein) - BC Finance Ltd. | New Day Jobs (Yangon, Myanmar)
Easy Apply (BC Finance Ltd.) Branch Cashier (Insein) job. View job description, responsibilities and qualifications. See if you qualify!
Bagan Capital isamember of The Union of Myanmar Federation of Chambers of Commerce and Industry, Hong Kong Venture Capital Association and the Emerging Markets Private Equity Association. At Bagan Capital, we see the potential in Myanmar's abundance of human and physical resources as well as its strategic location bridging Southern and ...
Eastern Asia. Our knowledge and experience of the Myanmar business environment makes us uniquely positioned to deliver superior results for our clients.Bagan Capital is an investment and advisory firm focused solely on Myanmar opportunities.The firm is alsoafoundation member of the Australian Myanmar Business Taskforce. Show more >
• မိမိရုံးခွဲရှိဝင်ငွေထွက်ငွေစာရင်းများကို Software ငွေစာရင်းစာအုပ်တွင် Teller transaction စာရင်းသွင်းရမည်။
• နေ့စဉ် Cash Transaction များ ကို ငွေစာရင်းစာအုပ် (Excel Sheet) တွင် စာရင်းသွင်းရမည်။
• ငွေချေးအဖွဲ့ဝင်များထံမှ ပြန်လည်ပေးဆပ်ငွေများကို ကောက်ယူလက်ခံရမည်။
• နေ့စဉ်ငွေလက်ကျန် ကိုစစ်ဆေးပြီး Record လုပ်၍ File တွဲထားရမည်။ ...
r>• ငွေရပြေစာများ၊ ငွေပေးပြေစာများကို Loan File တွင် တွဲရမည်။• အဖွဲ့ဝင်လျောက်လွာများ ကို Copy ကူး၍ အဆင်သင့်ပြုလုပ်ထားရမည်။• ရုံးချုပ် မှအခါ အားလျှော်စွာ ထုတ်ပြန်ထားသည့်ညွှန်ကြားစာများကို File တွဲထားရမည်။ • Payment Voucher, Received Voucher များတွင် လက်မှတ်များစုံမစုံ စစ်ဆေးခြင်း နှင့် File တွဲခြင်းပြုလုပ်ရမည်။• မိမိရုံးခွဲမှ အထက်အရာရှိများ၏ရုံးအလုပ်များကို ကူညီလုပ်ဆောင်ပေးရမည်။ • လိုအပ်၍ ပေးအပ်သောအခြားတာဝန်များကိုလည်း လုပ်ဆောင်ရမည်။ Show more >
• အသက် (၂၂) နှစ်မှ (၂၈) နှစ်အတွင်း
• လူမှုဆက်ဆံရေးလေ့လာသင်ယူမှု နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ ကောင်းမွန်သူ ဖြစ်ရမည်။
• Computer ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ရမည်။(MS Word, Excel, Outlook(email)).
Yangon-Insein Road,Kamaryut Tsp;Yangon.
JobsInYangon.com -4days ago